cashback - TrueMoney Transfer
TrueMoneyဝေါလပ် အပ်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အနည်းဆုံး ဘတ် 2,000 မှစလွှဲပြီး
TruemoveH အသုံးပြုသူဆိုလျှင် ပြန်အမ်းငွေ ဘတ် 50 နှင့် အင်တာနက် 1GB၊ အခြားဖုန်းလိုင်း
အသုံးပြုသူဆိုလျှင် ပြန်အမ်းငွေ ဘတ် 20 ရယူပါ
အစီအစဥ်ကာလ၊: မေလ 11, 2021 – ဒီဇင်ဘာလ 31, 2021
TrueMoneyဝေါလပ် အပ်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အနည်းဆုံး ဘတ် 2,000 မှစလွှဲပြီး TruemoveH
အသုံးပြုသူဆိုလျှင် ပြန်အမ်းငွေ ဘတ် 50 နှင့် အင်တာနက် 1GB၊ အခြားဖုန်းလိုင်း အသုံးပြုသူဆိုလျှင်
ပြန်အမ်းငွေ ဘတ် 20 ရယူပါ
– တစ်လလျှင် 1 ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်ပါမည်
– အနည်းဆုံး ငွေလွှဲပမာဏ : ဘတ် 2,000
– TrueMoneyဝေါလပ် အပ်ပလီကေးရှင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲခြင်းမှသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်
1. ဤပရိုမိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှု (“ပရိုမိုးရှင်း”) ကို True Money Company Limited (“ကုမ္ပဏီ”) ကထောက်ပံ့ပေးပြီး မေလ 11 ရက် 2021 – ဒီဇင်ဘာလ 31, 2021 (“ ပရိုမိိုးရှင်း ကာလ” ) အတွင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဥ်းအခြေအနေများဖြင့် TrueMoney Wallet အပ်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲသော မြန်မာဖောက်သည်များအား အထူးအခွင့်အရေးများပေးရန်ဖြစ်သည်။
2. ကုမ္ပဏီသည် TrueMoneyဝေါလပ်အပ်ပလီကေးရှင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အနည်းဆုံးငွေပမာဏ ဘတ် 2,000 လွှဲသော မြန်မာအသုံးပြုသူများကို TruemoveH အသုံးပြုသူဆိုလျှင် ပြန်အမ်းငွေ ဘတ် 50 နှင့် အင်တာနက် 1GB၊ အခြားဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုသူဆိုလျှင် ဘတ် 20 ပေးခွင့်နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း တစ်လလျှင် တကြိမ်သာ ပေးခွင့်ရှိသည်။
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အောက်ရှိ အခွင့်အရေးများကို လဲလှယ်ခြင်း၊ ငွေသားပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါ။
4. ဤကမ်းလှမ်းမှုတွင် မည်သည့်အခွင့်ထူးကိုမဆိုရရှိရန်အတွက် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွေ့ရှိရပါက လုံးဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့အတွက် ကုမ္ပဏီမှအခွင့်ရှိပြီး
ရရှိသောဆုကြေးအား မည်သည့်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်၊ သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအားဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ သုံးစွဲမှုမဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းခြင်းကို အသုံးပြုသူမှလက်ခံပြီးနောက်တွင် လုပ်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖြတ်ခြင်းတို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
5. ကုမ္ပဏီသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အသေးစိတ်များ သို့မဟုတ် အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် ညီမျှသောတန်ဖိုးရှိသည့်အခြားဆုများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မည်သည့်အငြင်းပွားမှုတွင်မဆိုကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာလျှင် အမှန်ဖြစ်သည်။
6. အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက၊ 1240 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
မြန်မာပြည်သို့ ပြန်အမ်းငွေရ နိုင်ငံတကာငွေလွှဲလှုပ်ရှားမှု
1. အပ်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ပြီး TrueMoney Transfer ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
2. ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုရန် အတည်ပြုမည်ကို နှိပ်ပါ
3. အထောက်အထားအတည်ပြုရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါ (ဥပမာ။ ပတ်စ်ပို့နှင့် ဝေါ့ပါမစ်)
4. ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနိုင်ခြင်း အတည်ပြုမှုအား ရရှိပါမည်
5. စည်းကမ်းချက်နှင့် အခြေအနေများကို လက်ခံပါ
6. နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်ပါ
7. လွှဲလိုသည့် ပမာဏအားဖြည့်ပြီး နောက်တစ်ခု ကိုနှိပ်ပါ
8. ငွေလက်ခံသူ၏ အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီး အတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်ပါ
9. အချက်အလက်အားလုံးကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုမည်ကို နှိပ်ပါ
10. လုပ်ဆောင်မှုအား အတည်ပြုပြီး ပေးရန် နှိပ်ပါ
11. ငွေလွှဲမှု ပြေစာအား ရယူပါ
TrueMoney Co., Ltd.
101 True Digital Park, Pheonix Building, 7-8 floor,
Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Bang Chak,
: 1240 ext. 4
: TrueMoney Transfer Myanmar